Banyere Anyị - Amazons Ngwá ụlọ Materials Co.Ltd.
Emebere Yamazonhome na 2012, nke mbu buru ibu na imeputa ugbo ndi America na ihe ndi ohuru nke Europe. Ugbu a, ọ bụrụla onye na-eweta sofas dị larịị, nwee ike ịnye sofas ndị a tụrụ atụ, arịa ụlọ osisi siri ike, arịa ụlọ mbadamba, arịa ụlọ na ihe egwuregwu. Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị ọrụ 180 na osisi ahụ kpuchiri mpaghara nke mita 18,000. Ọ dị na Nke 300 Yuanfeng Street, Shouguang City, Shandong Province. Ọ nwere atọ n'ụzọ zuru ezu arụzi ngwá ụlọ mmepụta edoghi, akpaka panel ọnwụ igwe, onu banding igwe, punching igwe, na CNC machining emmepe. Na ngwaọrụ ndị ọzọ na-arụpụta arịa ụlọ. Enwere ndị na-ese ihe 5 nke arịa osisi siri ike, arịa ụlọ, na arịa ụlọ anụ ụlọ, ndị nwere ike chepụta ma mepụta ụdị arịa dị iche iche dịka ndị ahịa chọrọ.
Na 2020, ụlọ ọrụ ahụ ga-ebupụta otu egwuregwu R&D na-emepụta egwuregwu egwuregwu ọhụrụ, bụ nke na-etinyekarị aka na R&D na imepụta ihe eji egwu mmiri na ụgbọ mmiri nwere ike ịgbanye. A na-ere ngwaahịa ụlọ ọrụ na mba na mpaghara dị iche iche na Europe, America, Middle East, Africa na South America, ọnụ ahịa ahịa kwa afọ karịrị nde US 60. Welcome esenidụt ahịa ileta anyị ụlọ ọrụ na-atụle imekọ ihe ọnụ.
Yamazonhome sitere n'ichepụta ụlọ ọrụ ọfịs ma mepụtala ugbu a n'ime nnukwu ụlọ ọrụ na-arụpụta ngwa ngwa na-arụpụta ọrụ na ịre ahịa nke sofas dị mfe, arịa ụlọ anụ ụlọ, arịa ụlọ e ji osisi rụọ nke ọma na, Ọ bụ onye njikwa ụlọ ọrụ bụ Meng Linggang guzobere ụlọ ọrụ ahụ na mbụ. Dabere na iche echiche nke na-achọ lanarị na iguzosi ike n'ezi ihe ma na-achọ mmepe na ihe ọhụrụ, ụlọ ọrụ ahụ na-arụsi ọrụ ike na-aga n'okporo ụzọ nke ụlọ ọrụ e-commerce na-emepụta ngwá ahịa e-commerce.
Ngwongwo ohuru nke ohuru nke Yamazon wuru ohuru na-enweta onu ogugu nke 72,000 square mita nke ogwe osisi. Mepụta ọrụ ọhụrụ 39, weta ezinụlọ 39 ego karịa wee mepụta ozioma karịa maka ezinụlọ ndị ọrụ